Ixabiso elingakholelekiyo 3 Igumbi lokujonga i-Ocean View Condo eJaco! - I-Airbnb
Ixabiso elingakholelekiyo 3 Igumbi lokujonga i-Ocean View Condo eJaco!
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguJosh
I-Jaco Beach, eyona dolophu yaselwandle eyenzekayo e-CR, nje iikhilomitha ezingama-65 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya i-SJO.
Umgangatho wethu we-9 obanzi we-3 igumbi lokulala le-Condo lolona khetho lufanelekileyo kwiintsapho kunye nabahlobo ukonwabela amava angalibalekiyo. I-condo ibonelela ngekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye namagumbi okulala ahlukeneyo anabo bonke ubutofotofo bekhaya.
Indawo efikelelekayo, ekhululekileyo kwaye yabucala kodwa ikuvumela ukuba undwendwele ulwandle oluyi-150m kude kunye nokuhamba umgama ukuya kumda weJaco kunye neendawo zokutyela ezahlukeneyo kunye neevenkile zokutyela.
I-Jaco Bay Condo yenye yezona ndawo zintsha kule ndawo. Ipropathi yethu ibonelela ngezinto eziluncedo ezikumgangatho wehlabathi kunye nentuthuzelo enikezela ngefenitshala yoyilo kunye nehombiso yangoku, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye namagumbi okulala ahlukeneyo athembisa bonke ubutofotofo bekhaya.
Nokuba ujonge ukuphumla kwiidekhi zelanga kunye neendawo zokuhlala ezijikeleze idama lethu lokuqubha elikhulu lasimahla okanye ukonwabele usuku lokuphonononga ubuyela kumbono obalaseleyo wokutshona kwelanga ubusuku ngabunye ngokuqinisekileyo kuya kuwaphucula amava akho eholide eCosta Rica!
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, Ibhedi encinci eyi- 1
4.92 · Izimvo eziyi-203
Ibekwe ngokufanelekileyo eJaco Beach, enye yeedolophu ezenzeka elunxwemeni eCosta Rica, kunye neekhilomitha ezingama-65 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe saseJuan Santamaría, iJaco Bay Condo yenye yeehotele ezintsha ekufikelwa kuzo kule ndawo kunye nesiseko sekhaya esifanelekileyo. ukuhlala kwaye ujonge umgca wonxweme oluphakathi kwepacific eCosta Rica.
Indawo ekhuselekileyo yesango ikude ngokwaneleyo ukusuka kumbane osezantsi edolophini ukuze ube noxolo kwaye ubucala. Nangona kunjalo kukumgama wokuhamba ukuya kwiivenkile ezinkulu, iindawo zokumisa iibhasi, iindawo zokutyela, iindawo zokuzivocavoca kunye nayo yonke into uJaco anokuyinika!
Siyavuya ukwabelana ngamava ethu eCosta Rica ngesicelo nangona kunjalo uya kuhlolwa kwaye uphume kwaye ujongwe kwi-site ngabasebenzi bethu.